Mogadishu Journal » Wasaarada amniga oo war ka soo saartay rasaas lagu riday xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka
Mjournal :-Wasaarada amniga xukumadda fedraalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xabad uu Askari ka tirsan Ciidamada amniga uu ku riday Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo dhacday 23-bishaan May kana dhacday barta koontaroolka ee Ciidamada Amniga ay ku leeyihiin KM 0 ee Magaalada Muqdisho.
Xildhiabaan C/llaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Ciidamada amniga waxay xabad kor ugu rideen Xildhiabaanka oo marayay Koontaroolka Ciidamada amniga ay ku leeyihiin agagaarka KM-O.
“Waxaa goobta ka dhacday hal xabbad oo kaliya taasoo askari ka tirsan ciidamada uu kor ugu riday digniin ahaan xildhibaanka, kadib markii uu ka shakiyay gaari ka gudbay barta kontorool”. Sidaas waxaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaarada amniga.
Waxaa sidoo kale Qoraalka lagu yiri Wasaaradda Amniga waxay caddeyneysaa in ay billowday baaritaan dhacdadaas la xiriir.
Ra’iisal wasaare Kheyre oo ku sii jeeda dalka Itoobiya